Vato urinary na vato tatavia | Alika Manerantany
Vato urinary na vato tatavia
Ny alika koa dia mety hijaly noho ny tahotra vato ao anaty tatavia, fantatra koa amin'ny hoe urinary vato. Ity dia olana iray izay azo aseho amin'ny fiafarana fototarazo, amin'ny fijaliana noho ny aretina mikraoba, izany hoe cystitis, na amin'ny alàlan'ny fatran'ny mineraly na ny pH an'ny urine. Izany no antony na dia manana fomba fiaina mahasalama aza ny alika, dia tsy azo antoka amin'ny fijaliana izany.
ny vato urinary Izy ireo dia ny fananganana mineraly izay miseho amin'ny urine toy ny kristaly mikraoskaopy. Tsy maintsy roahina ireo mineraly ireo mba tsy hijalian'ny alika amin'ny olana amin'ny tatavia sy amin'ny lalan-dra manontolo izay mety ho lasa sarotra, mametraka ny ain'ilay biby amin'ny tranga sasany.
Na dia misy resaka vato momba ny tatavia aza dia mety ihany koa ireo miseho amin'ny voa, ao amin'ny ureter, tatavia na urethra. Saingy, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo vato ireo dia ao anaty tatavia. Ny marina dia raha ao amin'ny voa na ureter izy ireo, izay fantsona mitondra urine amin'ny tatavia, dia mety ho avo kokoa ny risika, ny alika mila fandidiana.
Mety tsy hiseho famantarana, na dia mitranga matetika aza ny alika dia mila mimiaka be, ary miaraka amin'izay dia toa mandoa azy izany. Misotro rano be izy ary indraindray misy ra ao amin'ny urine. Raha sendra soritr'aretina mahazo aina na fahasahiranana dia tokony hoentina any amin'ny mpitsabo biby ny alika mba hanombanana ny fitsaboana.
Tapa-kevitra indraindray miasa ny alika rehefa matotra kokoa ny raharaha, fa azo atao koa ny mampiditra vahaolana masira ao anaty tatavia amin'ny alàlan'ny catheter hanalana ireo vato, na hampiasana antibiotika amin'ny tranga maivana kokoa. Na inona izany na inona, ny alika dia tsy maintsy mihinana antibiotika mandritra ny fotoana fohy, ary koa mandray sakafo manokana ho an'ireo tranga ireo, manara-maso akaiky azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Vato urinary na vato tatavia
Fa maninona ny alika no mihilona ny lohany rehefa miresaka aminy aho?
Fomba hanampiana ireo mpiaro ny biby